Akhri: Madaxweynaha Puntland oo si kulul u weeraray Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Madaxweynaha Puntland oo si kulul u weeraray Alshabaab
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa si wadajir ah shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda DF Soomaaliya uga tacsiyeeyey masuuliyiinti iyo shacabkii ku geeryooday weerarkii Kooxda argagixisada ah ee Al-shabaab ay ku qaadeen maanta mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho.
“Intii dhimatay allaha unaxariisto, maalin fiican oo kheyr ayey dhinteen, waxaan rajeynayaa Ilaahna uga baryayaa inta dhaawaca ah caafimaad deg deg ah in ilaahay siiyo” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku tilmaamay falkaasi in uu ahaa mid argagaxisnimo islamarkaana cadaynayana dabeecada runta ah ee ay leeyihiin kooxda argagixisada ah ee Al-shabaab.
“Maalin jimce ah dad islaam ah oo soo tukaday oo weliba masaajid ka soo baxay inay laayaan waxay ka turjumaysaa oo calaamad dhab ah u tahay sida ay uga fog yihiin islaanimada, sida ay uga fog yihiin diinteena” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
“Inay caadaystaan oo ay xalaalaystaan dhiiga dad islaam ahi, waxay muujinaysaa dhaqankooda foosha xun, waxay muujinaysaa inaysa dad islaam ah ahayn waxay sidookale muujinaysaa inay banaan tahay in lagu jihaado meel kasta oo ay joogaana lagula dagaalamo laguna laayo sabatoo ah ajande soomaaliyeed malahan, mid islaam ahna malahan ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa isna dhankiisa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan ladagaalanka kooxdaasi argagixisada ah ee banaystay dhiiga dad muslimiin ah oo aan waxba galabsan.
“Naxariisti jano allaha ka waraabiyo samir iyo iimaan buuxana Alle haka siiyo dhammaan eheladii iyo asxaabti ay ka tageen masuuliyiinti iyo shacabkii ku geeryooday weerarkaasi” ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey.
RW UK oo dhambaal usoo diray madaxweynaha Somalia (Maxaa ku qornaa?)
Duceysateene, dadkiinu ma idiin duceeyey?